နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ကဘယ်လို | ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့သတင်းအချက်အလက် | USAHello
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်ပါနဲ့? သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ, သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်: သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာမှအရည်အချင်းပြည့်မီ? သငျသညျလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်အထဲက Find. ထိုအခါသင်သည်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ယူဖို့လိုအပ်အဆင့်လေ့လာသင်ယူ.
သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားလိုပါက, သင်နိုင်ငံသားအဖြစ်လိုအပ်ချက်များကိုလွန်သွားလျှင်ထွက်ရှာရန်သင့်အားပထမဦးဆုံးလိုအပ်. ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
၏အနိမ့် 18 အသက်
နေထိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ်ကအနည်းဆုံးငါးနှစ်များအတွက် USA တွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူး
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. Read နိုင်ငံသားလိုအပ်ချက်s ကို အသေးစိတ်သေချာသင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်. ထိုအခါသင်သည်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်.
နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားအလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ရှေ့နေအကူအညီနဲ့သင်ရှိသည်အကြံပြု. ဒါဟာစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်နိုင်မည်အကြောင်း ဥပဒေရေးရာအခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းရှာတွေ့ ကူညီပါ အွန်လိုင်းနှင့်သင့်ရပ်ရွာထဲတွင်.
1. အဆိုပါ N-400 ပုံစံဖြည့်စွက်
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် သဘာဝကိုလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်. ဒါကလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရပုံစံဖြစ်ပါသည် N-400. သင့်အနေဖြင့်မေးလ်ထဲမှာပြီးစီးခဲ့ပုံစံပေးပို့နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်သင်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အဆိုပါ N-400 ပုံစံကို Download လုပ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း apply.
အရေးကြီးသော: ဒီဇင်ဘာလကနေ 2019, USCIS ကိုသာလက်ခံနေသည် 2019 ပုံသဏ္ဌာန်. သေချာအောင်လုပ်ပါသင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်ကိုမဆိုပုံစံတစ်ခုချင်းစီကိုစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာဒီရှိပါတယ်: Form ကို N-400 Edition ကို 09/17/19. ဒါကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည့်ရက်စွဲရှိပါက, အသစ်တခုပုံစံကို download လုပ်ပါ နောက်တဖန်စတင်ရန်.
သငျသညျအပလီကေးနှင့်အတူအများအပြားစာတမ်းများထည့်သွင်းရန်ရှိသည်နှင့်သင်ကိုလည်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သငျသညျထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်အရာကိုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း သင်သည်သင်၏ N-400 လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါ. သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓါတ်ပုံပါဝင်သည်ရန်ရှိသည်. ဤဓါတ်ပုံများကို၏နောက်ကျောအပေါ်သင်၏ "A-number ကို" ရေးသားဖို့ကိုသတိရပါ. သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်တချို့လူတွေကတစ်ဦးအခကြေးငွေစွန့်လွှတ်ဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
သင်တစ်ဦးရှေ့နေမရှိဘဲသင်၏စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်နေတယ်ဆိုရင်, အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက် CitizenshipWorks.org လျှောက်လွှာခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်. သငျသညျအပိုအကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုရင် Citizenshipworks လည်းအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင့်ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦး Citizenshipworks မိတ်ဖက်ဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီပေးသငျသညျဆက်သွယ်နိုင်သည်.
နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားများသောအားဖြင့်ကုန်ကျ $725. ဤသည်၏ biometric အခကြေးငွေများပါဝင်သည် $85 နှင့်များ၏ပုံစံတင်ပို့ရန်ကြေး $640. အရေးကြီးမှတ်ချက်: အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ပုံစံတင်ပို့ရန်ကြေးတိုးမြှင့်မည်ဟုဆိုသည် မှ $640 သို့ $1,170 ဒီဇင်ဘာလအပြီးတချို့အချိန် 16, 2019. သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားလိုပါက, ယခုလျှောက်ထားကျော်ကယ်တင် $500. သင်လုပ်နိုင်သည် အဆိုပြုထားအပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
သငျသညျမမျှော်လင့်ဘဲအရေးပေါ်အခြေအနေရှိပါကသင်သည်သင်၏ဝင်ငွေလုံလောက်အောင်အနိမ့်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြသနိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးအခကြေးငွေစွန့်လွှတ်ရနိုင်မည်အကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်. တစ်ဦးကစွန့်လွှတ်သငျသညျဆပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်မည်ဟုဆိုလိုသည်. သငျသညျကိုဘယ်လိုအကြောင်းအသေးစိတ်ဖတ်နိုင် တစ်ဦးစွန့်လွှတ်လျှောက်ထား. အရေးကြီးမှတ်ချက်: စွန့်လွှတ်စနစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည် 2020. သင်လုပ်နိုင်သည် အဆိုပြုထားအပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ. USAHello သင်တစ်ဦးစွန့်လွှတ်လျှောက်ထားစဉ်းစားနေကြသည်လျှင် USCIS သင့်လျှောက်လွှာငြင်းဆန်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိုရယူအကြံပြု.
အရေးကြီးသော: သင်ကပို့ခင်သင့်ရဲ့ N-400 များ၏မိတ္တူ Make.
2. သင်၏ပြေစာကို Save နှင့်အွန်လိုင်းသင့်လျှောက်လွှာစစ်ဆေး
သငျသညျ USCIS သင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိပြောပါတယ်ကြောင်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ဒီသိမ်းဆည်းထားပါနှင့် 13-ဂဏန်းငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအရေအတွက်အားချရေးပါ. သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ဓာတ်ပုံကို ယူ. သင်ကဆုံးရှုံးကြဘူးသေချာစေရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအီးမေးလ်ပို့. သငျသညျဖို့ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအရေအတွက်ကသုံးနိုငျ သင်၏လျှောက်လွှာ၏ status စစ်ဆေး.
3. သင့် biometric စိစစ်ဖြည့်စွက်
biometric စိစစ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအခြို့သောနေ့ရက်နှင့်အချိန်မှာရုံးကိုသွားတောင်းပါလိမ့်မယ်. ဒီချိန်းသွားပါရန်နှင့်အချိန်မီရောက်ရှိစေရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ! ခန့်အပ်မှာပါ, သူတို့သည်သင်၏လက်ဗွေယူပါလိမ့်မယ်. ဤသည်မှာသူတို့သည်သင်၏လက်ဗွေကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့နဲ့သေချာသင်တစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်စေတဲ့စနစ်မှတစ်ဆင့်ပုံကို run ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်. ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ biometric ချိန်း.
တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ဖြည့်စွက်. ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ အဖြစ်ပြောင်းလဲအင်တာဗျူး နှင့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံ.
သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, သငျသညျကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်ယူပါလိမ့်မယ်, သမိုင်းနှင့်အစိုးရ. ဒီစာမေးပွဲတွင်, သငျသညျဖြေဆိုရပါမည်6ထဲက 10 မှန်ကန်စွာမေးခွန်းများကို. သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်အလေ့အကျင့်ပဟေဠိ သင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပါကကြည့်ဖို့. သငျသညျအဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ join လို့ရပါတယ် အခမဲ့နိုင်ငံသားလူတန်းစား စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်.
သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. USCIS ထံမှရေးသားထားသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူး၏နေ့ပေါ်တွင်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သင်နောက်ပိုင်းတွင်မေးလ်ထဲမှာခံယူစေခြင်းငှါ,. သင့် application ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောပါလိမ့်မည်:
သငျသညျဖြတ်သန်းခဲ့တယျလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်အခမ်းအနားပြီးမြောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်သစ္စာ၏အကြိနျယူဦးမည်. သငျသညျကို USA မှသစ္စာရှိမှုအပေါင်တဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက, သငျသညျခေါ်နိုင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်. ဤအဖွဲ့များအချို့မျက်နှာသစ်ဘာသာစကားများအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်. သငျသညျအနီးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းနိုင်ငံသားအဖြစ်အကူအညီနဲ့ရှာမည်.
အဆိုပါ N-400 ပုံစံဖြည့်စွက်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ USCIS. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.